नेशनल क्यापिटल अवार्ड कार्यक्रममा विभिन्न व्यक्तित्व सम्मानित
काठमाडौं : आइतबार राजधानीमा सम्पन्न आठौं नेशनल क्यापिटल अवार्ड २०७८ बाट गायिका दुर्गा खरेल र गायक राजकुमार सिंह सर्वाेत्कृष्ट गायक गायिका ठहरिएका छन् । गायिका खरेलले नथिया गीतबाट सर्वाेत्कृष्ट गायिकाको अवार्ड पाएकी हुन् भने गायक सिंहले बलेको आगो गीतबाट अवार्ड हात पार्न सफल भएका हुन् ।
कार्यक्रममा नथिया गीतबाट नै संगीतकार अर्जुन पोखरेलले पपुलर संगीतकार अफ दि इयरको अवार्ड पाए । अवार्डमा वरिष्ठ संगीतकार शम्भूजित बास्कोटालाई लाइफटाइम अचिभमेन्ट अवार्ड प्रदान गरिएको थियो ।
त्यस्तै मनोहर सुनामलाई दशकको संगीतकारको सम्मान प्रदान गरियो । राष्ट्रिय दैनिक मध्यान्हकर्मी पत्रकार सानुकाजी श्रेष्ठलाई पत्रकारिता रजत सम्मान २०७८ प्रदान गरियो भने पत्रकार एमपी सुब्बालाई राष्ट्रिय पत्रकारिता सम्मान अर्पण गरिएको थियो । त्यस्तै गायक अमृत खाती र गायिका सीता केसीलाई राष्ट्रिय युवा प्रतिभा सम्मान प्रदान गरियो ।
पूर्व सञ्चार तथा सुचना प्रबिधि मन्त्री पार्वत गुरुङको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न कार्यक्रमको आयोजक संस्थाका अध्यक्ष मनोज निर्दोषले सभापतित्व गरेका थिए । कला, गीतसंगीतका विविध विधामा अवार्ड तथा सम्मान बितरण गरिएको कार्यक्रमको संयोजन सञ्चारकर्मी सविता पोखरेलले गरेकी हुन् ।
‘मोफसलबाट कलाकारिता गर्नु फलामको चिउरा चपाउनु सरह’
गायक एवं अभिनेता साथै युवा नेतासमेत रहेका श्यामकुमार मिश्रको भोजपुरी पप गीतसंगीतमा छुट्टै पहिचान छ । मिश्रको आफ्नै स्वर रहेको ‘गोरी तु तो बाटु रुपके खजना, देखा हम तो बाटी हो तोहरे दिवाना’ बोलको भोजपुरी पप गीत बजारमा आउने तयारीमा रहेको छ । गीतमा चर्चित भोजपुरी संगीतकार के.के. सिंहको संगीत संयोजन रहेको छ । कपिलवस्तुको कृष्णनगर निवासी मिश्र भोजपुरी तथा नेपाली गीत, संगीतको क्षेत्र र नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा आफ्नो छुट्टै पहिचान बनाउन सफल छन् । उनले आधुनिक नेपाली गीतको एल्बम पनि स्रोता र दर्शकमाझ ल्याउने तयारी गर्दैछन् । एकीकृत राप्रपा राष्ट्रवादीको केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित हुनासाथ गत स्थानीय चुनावमा मेयरको उम्मेदवारी बनेका उनी झिनो मतान्तरले पराजित भएका थिए भने हालै सम्पन्न स्थानीय चुनावमा जसपाबाट उपमेयरको उम्मेदवार बनेका थिए । कलाकारितासँगै सामाजिक, राजनीतिक र व्यवसायलाई समेत सँगसँगै लिएर अगाडि बढिरहेका मिश्रले नालायक, देउता, किङ, ब्वाईफ्रेण्ड लगायतका चलचित्रमा अभिनय गरेका छन् । चौथो म्युजिक खबर म्युजिक अवार्ड, डि सिने अवार्ड, बक्स अफिस फिल्म अवार्ड, मिलाप कभर सम्मान, राष्ट्रिय व्यक्तित्व सम्मान लगायतका सम्मानबाट सम्मानित भइसकेका श्यामकुमार मिश्रले मध्यान्ह दैनिकका लागि सानु श्रेष्ठसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
पछिल्लो समय कसरी बित्दैछ ?
यो पटकको स्थानीय चुनावमा पनि जसपाबाट उपमेयरमा उठेको कारण केही समय स्थानीय जनताहरुसँग प्रत्यक्ष साक्षत्कार कार्यक्रममा व्यस्त रहें । ठूला दलसँग प्रतिस्पर्धासँगै तयारी फितलो बनेका कारण असफल भएँ । यसलाई पराजय भन्दा पनि आगामी दिनका लागि शिक्षाको रुपमा लिएको छु ।
गायनको क्षेत्रमा के गर्दै हुनुहुन्छ ?
आठ वटा गीत समेटेर एल्बम निकाल्ने अन्तिम तयारी भैरहेको अवस्थामा एक्कासी कोभिडको प्रवेशले त्यतिकै थाँती रहन पुग्यो । अहिलेसम्म पनि त्यसलाई अगाडि बढाउन सकिएको छैन । चुनावी ह्याङ कम भएपछि एल्बमको कामलाई निरन्तरता दिने विचार गरेको छु ।
भोजपुरी गीत पनि ल्याउने कुरो थियो नि ?
‘गोरी तु तो बाटु रुपके खजना, देखा हम तो बाटी हो तोहरे दिवाना’ बोलको भोजपुरी पप गीत बजारमा आउने अन्तिम तयारीमा छ । सम्भवत आगामी महिना सर्वजनिक हुन्छ ।
मोफसलबाट कलाकारिता गर्न कत्तिको कठिन छ ?
कठिन नै थियो । त्यसमा पनि मधेसी मुलका हामी जस्ता कलाकारले सजिलै अवसर पाउनु भनेको त दिवास्वप्ना देख्नु सरह हो । महँगो शहर काठमाडौंमा आर्थिकरुपले पनि समस्या हुने नै भयो । यति दिनमा काम सकिन्छ भन्ने टुंगो हुँदैन थियो । अहिलेको पुस्ताले आफूमा भएको प्रतिभा इन्टरनेट, फेसबुक, युट्युबमा देखाउन सक्छन् । उसबेला कसैलाई भेट्नुपर्यो भने लामो समय पछ्याउनुपथ्र्यो । सबैको हातमा अहिले जस्तो टेलिफोन र मोबाइल सर्वसुलभ उपलब्ध थिएनन् । स्रष्टाको अफिस खोज्नुको विकल्प थिएन । यदि भेट भएको अवस्थामा पनि उनीहरुले तुरुन्तै हाम्रो प्रतिभा हेर्दैन थिए । अहिले घरमा बसेर मोबाइल चलाइरहँदा नयाँ प्रतिभा हेर्न पाइन्छ । अहिलेको जस्तो पहुँच नभएकाले त्यो बेला कठिन थियो । बोर्डरमा बस्ने भएकोले शुरुवाती दिनमा भारतको गोरखपुर पुगेर गीत रेकर्डिङ गरिन्थ्यो । अहिले पनि मेरा अधिकाँश गीत गोरखपुरमै रेकर्डिङ हुने गरेको छ । पछिल्लो एल्बम काठमाडौंबाट निकाल्ने सोचले राजेन्द्र बजगाईंको संगीतमा आठ वटा गीत बन्दै थियो, त्यो पनि बीचैमा अड्किरहेको छ ।
भोजपुरी र नेपाली गीतमा कुन सजिलो गाउनलाई ?
तराईवासी भएकोले भोजपुरी गीत गाउन सजिलो लाग्छ । नेपाली भएको नाताले आफ्नै भाषामा पनि एल्बम निकाल्ने चाहना भएकोले नेपाली भाषामा गीत बनाएको हुँ । नेपाली गीत गाउने क्रममा अलि समस्या हुँदो रहेछ ।
स्टेज प्रोगामहरुमा तपाईंको डिमाण्ड कत्तिको छ ?
गृह जिल्लामा मात्र नभई अन्यत्र हुने अधिकांश कार्यक्रममा मेरो उपस्तिथि अनिवार्य जस्तै हुन्थ्यो । कोभिड १९ यता कुनै प्रोगाममा गएको छैन । विस्तारै वातावरण सहज बन्दैछ, अब गीतसंगीतमा पनि अलि सक्रिय हुने सोच बनाएको छु ।
अडियो र सिडी एल्बमको जमना गयो, एल्बम निकाल्ने तयारी गर्दै हुनुहुन्छ किन ?
आधुनिक प्रविधिको विकाससँगै एल्बमको प्रचलन हराए । पहिले क्यासेट बिक्रीबाट पनि आर्थिक सपोर्ट हुन्थ्यो भने अहिले युट्युबको भर पर्नुपर्छ । मुख्य आयस्रोतको माध्येम भनेको देश, विदेशमा हुने स्टेज कार्यक्रम नै हो । तर आफ्नो कृति दस्तावेजका लागि पनि एल्बमको आवश्यक छ ।
चलचित्रमा देखिन छाड्नु भयो नि ?
यो क्षेत्र हामी जस्ता मोफसलबाट धाएर कलाकारिता गर्नु भनेको फलामको चिउरा चपाउनु जस्तै हो । भोलिबाट सुटिङ हुन्छ, तपाईं आइहाल्नुस् भन्नुहुन्छ, खुशी हुँदै हतारहतार झोला बोकेर काठमाडौं उत्रेको साता दिन बित्दा पनि सुटिङ हुने टुंगो हुँदैन । बसाई लम्बिएपछि खान बस्न खर्चको समस्या, अझै कति दिन बस्नुपर्ने हो थाहा हुँदैन । मुश्किलले दुई सिन सुटिङ हुन्छ अनि निर्देशकले भन्नु हुन्छ तपाईंको अब अलि पछि हुन्छ । निर्माताले भन्नुहुन्छ सुटिङ सक्न अलि गाह्रो होला जस्तो भयो आर्थिक सहयोग गर्नु पर्‍यो । कला क्षेत्रमा केही गरुँ भनेर आएकाहरुलाई समस्याको सगरमाथा नै देख्छु म त । त्यसैले अभिनय भन्दा गायन नै ठिक लाग्छ ।
काठमाडौं नै धाउनुपर्नेको कारण ?
देशको प्रमुख शहर । सुविधा सम्पन्न प्रविधि जडित स्टुडियो । चलचित्र पनि यहीँबाट निर्माण हुने भएकोले रहर भन्दा पनि बाध्यता ठान्नुस् ।
तपाईं गायक कि अभिनेता ?
म आफुलाई कलाकार भन्न रुचाउँछु । गायन मेरो रुचीको विषय हो भने अभिनय सौखमात्र ।
व्यापार, व्यवसायमा पनि संलग्न हुनुहुन्छ, समय तालिकाको बारेमा थोरै भनिदिनुस् न ?
घर व्यवहार चलाउन कुनै न कुनै काम गर्नै पर्ने हुन्छ । कलाकारिताबाट सम्भव छैन । त्यसैले पहिलो प्राथमिकता काम बाँकी समय राजनीति, समाजसेवा अनि गीतसंगीत र कलाकारिता ।
गायक अर्जुन पन्तको स्वरमा मौलिक रत्यौली गीत ‘बुहारी’
काठमाडौं : गायक अर्जुन पन्त र गायिका सम्झना मगर नयाँ गीत लिएर स्रोता माझ आएका छन् । गायक पन्त र गायिका मगरको स्वरमा ‘बुहारी’ बोलको गीत सार्वजनिक भएको हो ।
गीतमा गायक अर्जुनकै शब्द तथा संगीत रहेको छ । मौलिक लोक लयमा आधारित रत्यौली गीत भएको कारणले पनि आमदर्शक तथा स्रोतले मन पराउनेमा आशावादी रहेको गीतका सर्जक अर्जुन पन्तले बताए । एम थापाले गीतलाई एरेन्ज गरेका छन् ।
पन्तले नै निर्देशन गरेको म्यूजिक भिडियोमा सन्जु पौडेल, अर्जुन पन्त, विकाश राज पौडेल, निर्मल पौडेल र अपर्ण परियार ‘जिरे’ले अभिनय गरेका छन् ।
सुर्य केसीले छायांकन गरेको म्युजिक भिडियोलाई प्रकाश एसकेले सम्पादन गरेका छन् ।
‘सबैभन्दा धेरै आत्मासन्तुष्टि नै संगीत सिर्जनामा मिल्छ’
संगीत नै पढेर संगीतमै समर्पित संगीत साधक हुन् योगेन्द्र उपाध्याय । त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट संगीतमा माष्टर डिग्री गरेका योगेन्द्र ‘ए’ ग्रेडका संगीतकार हुन् । सरकारी प्रसारणको एकमात्र रेडियो रेडियो नेपालले संगीतकर्मीहरुको ग्रेडिङ गर्ने गर्छ । रेडियो नेपालले गर्ने वर्गीकरणमा ‘ए’ ग्रेडको संगीतकार हुन त्यति सहज छैन । उनको संगीतकर्मले नै उनलाई यो सफलता दिएको हो । उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालय अघि विभिन्न संगीत पाठशाला÷स्कुलहरुमा संगीत सिकेका थिए । व्यवहारिक ज्ञानसँगै सैद्धान्तिक ज्ञान पनि आवश्यक महसुस गरी उनले संगीतमै उच्च शिक्षा लिए । उनले सिकेका ति हरेक सिकाइहरुलाई यतिबेला आफ्नो संगीत सिर्जनामा प्रयोग गरिरहेका छन् । भर्सटायल संगीतकारको परिचय बनाएका योगेन्द्रले आधुनिक, पप, लोक, भजनलगायतका जनरामा गीतसंगीत सिर्जना गरिसकेका छन् । विभिन्न संगीत प्रतियोगितमा प्रथम भएका योगेन्द्र शब्दको भाव अनुसार उत्कृष्ट संगीत सिर्जना गर्न सक्ने संगीतकार हुन् । संख्यात्मकरुपमा भन्दा गुणात्मकरुपमा अब्बल गीत सिर्जना गर्नु पर्छ भन्ने मान्यता राख्ने योगेन्द्रले व्यवहारत् त्यही कुरालाई प्रमाणित गरेका छन् । उनका गीतलाई संगीतका विश्लेषकहरुले उत्कृष्ट संगीत मान्छन् । अन्य संगीतकारको तुलनामा महँगो पारिश्रमिक लिएर काम गर्ने संगीतकारका रुपमा पनि योगेन्द्रलाई चिनिन्छ । उनी भने आफुले आफ्नो कर्म अनुसारको पारिश्रमिक लिने तर्क गर्छन् । प्रस्तुत छ संगीत साधक योगेद्रले मध्यान्ह दैनिकका लागि सानु श्रेष्ठसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
संगीत सिर्जनामै व्यस्त छु । गत सातामात्र एउटा गीत सार्वजनिक गरेको छु । यतिबेला अन्य गीतहरु सार्वजनिक गर्ने तयारीमा छु । केही गीतहरुको रेकर्डिङ चलिरहेको छ भने केहीको कम्पोजिसनको काम भइरहेको छ । यही बीचमा म आफ्ना केही गीति एल्बमहरु सार्वजनिक गर्ने पनि तयारीमा छु । आगामी महिनासम्ममा ३ वटा एल्बम एकसाथ सार्वजनिक गर्ने योजना छ । त्यसैको काम पनि भइरहेको छ । मैले स्कुलहरुमा पनि नियमितरुपमा संगीतको प्रशिक्षण गराउँदै आएको छु । समग्रमा संगीतकर्ममै व्यस्त छु ।
तपाईं एकसाथ ३ वटा एल्बमको तयारीमा हुनुहुन्छ, तर अचेल एल्बम निकाल्ने प्रचलन निकै कम छ नि ?
तपाईंले भनेको ठिकै हो अचेल एल्बम निकाल्ने चलन निकै कम छ । अचेल गीतसंगीत सिर्जना गरिसकेपछि सिंगल ट्रयाकका रुपमा गीत सार्वजनिक हुँदै आएको छ । मैले पनि विगतमा त्यसै गर्दै आएको थिएँ । तर मलाई एल्बम भनेको आफ्नो सिर्जनाको एउटा दस्तावेज हो भन्ने थाहा छ । त्यसैले मैले आफ्ना सिर्जनाहरुलाई एल्बमकै रुपमा सार्वजनिक गर्न लागेको हुँ । मैले २०७६ सालमै एल्बम सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिरहेको थिएँ । तर कोभिड १९ का कारण नेपालमा लकडाउन भयो । सरकारले जारी गरेको स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्दा एल्बम सार्वजनिक कार्यक्रम गर्न सकिने अवस्था रहेन, त्यसैले रोकियो । २०७७ सालमा अर्को एल्बम पनि तयार भयो । दुईवटा एल्बम एकसाथ रिलिज गर्ने तयारी गर्दै थिएँ, कोभिड १९ को दोस्रो लहर आयो । यो बीचमा मेरा गीतसंगीत त बजारमा आए, तर एल्बम सार्वजनिक गर्ने मेरो योजना केही समय रोकियो । यतिबेला तेस्रो एल्बमको काम लगभग सकिएको छ । यसैले अहिले म ३ वटा एल्बम एकसाथ सार्वजनिक गर्ने तयारीमा छु । छिट्टै एक कार्यक्रम गरी एल्बम सार्वजनिक गर्नेछु ।
तपाईं संगीत सिर्जना गर्दा के कुरामा बढी ध्यान दिनुहुन्छ ?
संगीत सिर्जना गर्दा ध्यान दिनुपर्ने पहिलो कुरा भनेकै शब्दको भाव हो । शब्दले के भन्न खोजेको छ, त्यसमा प्रयोग भएका विम्वहरुले के कुराको संकेत गरेको छ, ति सबैको अर्थ बुझेर सकेसम्म त्यसैको भाव सुहाउँदो मेलोडीमा संगीत सिर्जना गर्ने गर्दछु । कहिले काहीँ गायकको भोकल क्वालिटीका आधारमा पनि संगीतको स्केलहरु तय गर्नुपर्ने हुन्छ । मैले विविध जनराका गीतमा संगीत सिर्जना गरेको छु । यसैले कुन जनराको संगीत तयार गरिँदैछ त्यसलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ । हाम्रो परिवेश र मौलिकतालाई पनि ध्यानमा राख्ने गर्छु ।
तपाईंले त संगीतको औपचारिक शिक्षा पनि लिनुभएको छ ? संगीतकारहरुलाई औपचारिक शिक्षाको आवश्यकता कत्तिको देख्नु हुन्छ ?
शिक्षाको आवश्यकता त सबैलाई हुन्छ । कसैले अनौपचारिक त कसैले औपचारिकरुपमा संगीत सिकेका हुन्छन् । मैले शुरुमा संगीत साधना विद्यालय, गुरुकुल संगीत पाठशाला र इण्डियन कल्चर सेन्टरमा संगीत सिकेको हँु । विभिन्न गुरुहरुसँग संगीतको व्यवहारिक ज्ञान सिकेर मैले संगीत सिर्जना गर्न थालेको हुँ । काम गर्दै जाँदा मलाई कतिपय अवस्थामा संगीतको सैद्धान्तिक ज्ञान पनि लिनुपर्छ भन्ने भयो । जसका कारण त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट संगीतको औपचारिक अध्ययन गरें । मैले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट संगीतमै मास्टर डिग्री गरेको छु । संगीतको अध्ययन गरेर आउँदा आफ्नो संगीत सिर्जनाको दायारा फराकिलो बनाउन सकिन्छ । संगीतमा मात्र होइन हरेक क्षेत्रमा त्यसको व्यवहारिक ज्ञानसँगै सैद्धान्तिक अध्ययन गरेर आउँदा सुनमा सुगन्ध हुन्छ, होइन र ? यसअर्थ पनि मलाई त संगीतको अध्ययन आवश्यक लाग्छ ।
थोरै पछाडि फर्कौं, संगीतमा कसरी प्रवेश गर्नु भयो ?
सानैदेखि संगीतमा मेरो लगाव थियो । स्कुल पढ्दा पनि विभिन्न कार्यक्रमहरुमा सहभागी भई गीतसंगीत प्रस्तुत गर्थें । गाउँघरमा होस् वा स्कुलमा हुने कार्यक्रममा नै किन नहोस् म सहभागी भई कहिले गाउने त कहिले विभिन्न बाजाहरु बजाउने गर्थें । मेरो हजुरआमा पनि गायनमा रुची राख्नु हुन्थ्यो । उहाँको प्रभाव पनि होला । अहिले फर्केर हेर्दा लाग्छ मभित्र बाल्यकालमा नै संगीतको विजयारोपण भएको हो । त्यतिबेला मलाई साथीभाइ, शिक्षक अनि अभिवावकले पनि हौसला दिनुहुन्थ्यो । उहाँहरुको हौसला मेरा लागि प्रेरणा भयो । विद्यायलयस्तरीय अध्ययन सकेर उच्च शिक्षाका लागि २०५७ सालमा म काठमाडौं आएँ । काठमाडौं आएपछि मैले उच्च शिक्षासँगै संगीत सिक्न थालें । संगीत सिक्दै जाँदा विभिन्न प्रतियोगिताहरुमा पनि भाग लिन थालें । केही प्रतियोगितमा प्रथम भई उत्कृष्ट संगीतकार घोषित भएपछि मलाई यसै क्षेत्रमा भविष्य बनाउन थप सहयोग मिल्यो ।
यहाँ रेडियो नेपालले आयोजना गरेको २०७१ सालको आधुनिक गीत प्रतियोगितामा प्रथम पनि हुनुभयो, यो प्रतियोगितालाई तपाईंको जीवनको टर्निङ प्वइन्ट मान्न सकिन्छ ?
सकिन्छ । किनभने मैले यसअघि पनि विभिन्न प्रतियोगितामा सहभागिता जनाएको थिएँ । पुशपति संगीत कला प्रतिष्ठानको आयोजनामा २०६७ सालमा सम्पन्न भक्ति संगीत प्रतियोगिता र कृष्ण प्रणामी युवा परिषद् नेपालको आयोजनामा सम्पन्न राष्ट्रिय भक्ति संगीत प्रतियोगिता २०६८ मा पनि प्रथम भएको थिएँ । रेडियो नेपालले आयोजना गरेको आधुनिक गीत प्रतियोगितामा प्रथम भएपछि मेरो संगीत सिर्जनाको प्रशंसा गर्दै धेरैले यसै क्षेत्रमा सक्रिय रहन हौसला दिनुभयो । अग्रज संगीतकारको प्रेरणाले पनि मलाई यही क्षेत्रमा निरन्तरता दिन प्रेरणा मिल्यो । गायन प्रतियोगितामा अन्य सर्जकका गीतहरु प्रस्तुत गर्न सकिन्छ भने संगीत प्रयोगितामा आफैंले कम्पोज गरेको सिर्जना प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ । २०५७ देखि नै निरन्तर संगीत सिकिरहेको थिएँ । २०६७ सालमा सम्पन्न भक्ति संगीत प्रतियोगितामा सहभागी हुनु अघि नै म आफैंले संगीत सिर्जना गरिसकेको थिएँ । यद्यपि यहाँले भने जस्तो २०५१ मा सम्पन्न आधुनिक गीत प्रतियोगितापछि म थप सक्रिय भएर यस क्षेत्रमा लागें । त्यसपछि म निरन्तर संगीतमै छु ।
अब एकैछिन संगीत क्षेत्रको कुरा गरौं, वर्तमान स्थितिमा सांगीतिक क्षेत्रको अवस्थालाई कसरी लिनुभएको छ ?
अवश्य पनि सांगीतिक क्षेत्र थप फराकिलो हुँदै आएको छ । अडियो क्यासेट, सिडि, भिसिडी हुँदै डिजिटल युगमा प्रवेश गरेको छ । जसका कारण संगीतको बजार ग्लोबलाइज भएको छ । सर्जकहरुको सिर्जनाले फराकिलो स्थान ओगट्न पाएका छन् । सिर्जनामा रम्नेहरुका लागि पनि विभिन्न माध्यमहरु थपिइरहेका छन् । रेकर्डिङमात्र नभएर गीतसंगीतको वितरण सहज भएको छ । यस्तै रोयल्टी व्यवस्थापन पनि हुँदै आएको छ । श्रष्टालाई विभिन्न माध्यमबाट रोयल्टी प्राप्त हुन थालेको छ । संगीत क्षेत्रमा भविष्य देख्नेहरुको संख्या उल्लेख्य छ । जसका कारण प्रतिस्पर्धा पनि बढीरहेको छ । प्रतिस्पर्धा बढेसँगै उत्कृष्ट सिर्जनाहरु सिर्जित हुन थालेका छन् । समग्रमा भन्ने हो भने सांगीतिक क्षेत्र थप फष्टाएको छ । उत्कृष्ट सिर्जनाहरु बजारमा आउन थालेका छन् ।
पहिले र अहिलेका गीत सिर्जनामा खास फरक केही भेट्नु हुन्छ ?
समय गतिशील छ । समयको गतिसँगै हामी सबै चल्नु पर्छ । समयको चक्रसँगै हुने विकासले संगीतको सिर्जनामा पनि फरक पर्दो रहेछ । पहिले पहिलेका गीतहरु बढी मात्रमा मौलिक हुने गर्थे । शास्त्रिय संगीतको प्रयोग पनि त्यत्तिकै हुन्थ्यो । नेपाली परिवेशका विभिन्न भाकाहरु बढी मात्रामा मौलिक सुनिन्थे । अहिले मौलिक गीतहरु हुँदै नभएका होइनन् । शास्त्रिय संगीतको प्रयोग हुँदै नहुने होइन । तर ग्लोबलाइजेशनका कारण हरेक देशका संगीत सहजै सुन्न सकिन्छ । यसैले अहिले हामीले हाम्रो मौलिक भाकाहरुसँगै विश्व बजारमा चलिरहेको ट्रेण्डलाई पनि समातिरहेका छौं । गुणस्तरका हिसावले पहिले र अहिलेका गीतसंगीतमा खासै भिन्नता छैन । शैलीका हिसाबले अहिले थप फराकिलो बनिरहेको जस्तो लाग्छ ।
अन्त्यमा, संगीत क्षेत्रमा लागेर के पाइयो के गुमाइयो जस्तो लाग्छ ?
गुमाउन त केही गुमाएको जस्तो लाग्दैन । बरु धेरै कुरा संगीतबाट पाएको छु । पहिलो त यतिधेरै स्रोताको माया पाएको छु । गीतसंगीत प्रेमीको मायाले प्रफुल्लित नै छु । मेरो रुची नै संगीत भएकोले पनि होला मलाई संगीत सिर्जनामा रम्न मन पर्छ । संगीत नै पढे संगीतमै क्रियाशिल छु । मलाई सबैभन्दा धेरै आत्मसन्तुष्टि नै संगीत सिर्जनामा मिल्छ ।
भुपेन्द्र गुरुङद्वारा निर्देशित फिल्म ‘कप्टी’को पहिलो स्पेसल शो बेलायतमा हुने
कतार : निर्देशक भूपेन्द्र गुरुङको निर्देशनमा बनेको नेपाली फिल्म ‘कप्टी’को पहिलो स्पेसल शो बेलायतमा हुने भएको छ ।
बुधबार निर्माण टिमले एक पोस्टर सार्वजनिक गर्दै आगामी १९ जुन २०२२, मा सामुयल कोडि स्पोर्टस् कलेज फान्बोरोमा प्रदर्शन हुने घोषणा गरेको हो । चलचित्रमा चर्चित कलाकारहरु शेरबहादुर गुरुङ, उर्मिला गुरुङ, उमेश गुरुङ, स्मृति बलामी, गिरिप्रसाद पुन (लाहुरे दाइ) केशव राई, सोनी गुरुङलगायतको बेजोड अभिनय रहेको छ ।
सोलुखुम्बुको जुबु, मैदेल गाउँ, गोकियो रि, कालिन्चोक, लमजुङको डाँडाथोक गाउँ र इलाममा छायांकन गरिएको मौलिकपनको नेपाली कथानक चलचित्र ‘कप्टी’मा मदन काश्यप घिमिरेको छायांकन, बन्दे प्रसादको सम्पादन, समिर मियाको कलर र भी एफ एक्स, आश्रम गुरुङको शब्द/संगीत गायक/गायिका आर के नेपाली, धर्मेन्द्र सेवन, मेलिना राईको स्वर रहेको फिल्मको निर्माता मोहनकुमार खत्री, प्रेमबहादुर गुरुङ, मिनु लामा र अमेरिका निवासी मनिता गुरुङ र सहनिर्माता नातीकाजी गुरुङ रहेका छन् ।
भ्याली फिल्म एकेडमी प्रा.लि.को ब्यानरमा बनेको नेपाली फिल्म 'कप्टी'को स्पेसल शो निर्देशकको गाउँले परिवार डाँडाथोक युरी परिवारले आयोजना गरेको हो भने तमु छोज धीं यूकेका महासचिव इलम पोखरी समाजका अध्यक्ष परशु गुरुङ, तमु छोज धीं यूकेका सल्लाहकार लमजुङ समाज यूकेका कोषाध्यक्ष पूर्णराज गुरुङ र यूकेमा धेरै कार्यक्रमहरुमा कलाकारका संयोजन गर्ने कलाकार तथा समाजसेवी कुमार गुरुङको सहयोग र संजोकत्वमा प्रदर्शन हुन लागेको हो ।
गाउँले परिवेश रीतिथिति गाउँठाउँकै रहनसहन संस्कृति उजागर, पुरानो खेल ठेलो, प्रौढ शिक्षा कुरा गरिएको चलचित्रमा संसार कप्टीहरुको हातमा जान्छ तर छलकपट धेरैबेर टिक्दैन भन्ने सन्देश बोकेको चलचित्र हो 'कप्टी' । चलचित्र राम्रो बनेको बताउँदै निर्माता मोहन कुमार खत्रीले सबै दर्शकलाई हेर्न अनुरोध गरेका छन् ।
चलचित्र प्रदर्शनको लागि यूकेपछि युरोप, जापान, अस्ट्रेलिया, कतार, क्यानाडा, अमेरिकामा कुरा अगाडि बढेको र चाँडै प्रदर्शन मिति घोषण हुने निर्माता खत्रीले बताए ।
मौलिक चलचित्रहरुलाई साथ सहयोग र प्रोत्साहनको निमित्त चलचित्र 'कप्टी' हेर्न आइदिन यूकेवासी सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरुलाई निर्देशक गुरुङले अनुरोध गरेका छन् । यूकेमा अन्य ठाउँहरुमा शो, टिकेटलगायत थप जानकारीका लागि परशु गुरुङ, पूर्णराज गुरुङ, कुमार गुरुङलाई सम्पर्क गर्न सकिने जनाइएको छ ।
देश विदेशको स्पेसल र च्यारटी शो गरेपछि मात्र नेपालको हलमा प्रदर्शन मिति घोषणा हुने पनि निर्देशक गुरुङले बताए । यूके शो भव्य सफलताको निमित्त सम्पूर्ण सञ्चारकर्मी, समाजसेवीलगायत यूकेवासी नेपाली दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरु तथा सम्पूर्ण यूकेमा रहेको संघ संस्थालगायत सबैलाई निमन्त्रणा गरिएको आयोजक डाँडाथोक युरी परिवारले जानकारी गराएको छ ।
‘मायालु आभाष’ को म्यूजिक भिडियो सार्वजनिक
काठमाडौंः ‘मायालु आभाष’ बोलको गीत सार्वजनिक गरिएको छ । युट्युव मार्फत सार्वजनिक भएको गीतको म्यूजिक भिडियोमा अभिनेता आर्यन सिग्देल र अभिनेत्री पुजा शर्माको अभिनय रहेको छ ।
प्रताप दास र अनु ढकालको स्वर रहेको गीतको भिडियोलाई विधान कार्कीले निर्देशन गरेका हुन् । अष्ट्रेलिया र नेपालमा सक्रिय ‘नेपमेलो’ले तयार पारेको भिडियोमा निर्देशक कार्कीले केहि फरक शैलीमा कथा भन्ने प्रयास गरेका छन् ।
रबि मल्लको शब्द तथा संगीत तयार बनेको गीतलाई हरि हुमागाईंले छायांकन गरेका हुन् । भिडियोका सम्पादक बिकाश दाहाल हुन् भने कला निर्देशक मनिषा पोखरेल हुन् । गीतको एरेन्ज उदयराज पौडेलले गरेका छन् ।
धर्मेन्द्र सेवानको नयाँ गीत ‘एैयो रैयो सैयो’ सार्वजनिक
काठमाडौंः गायक धर्मेन्द्र सेवानको नयाँ गीत सार्वजनिक भएको छ । ‘एैयो रैयो सैयो’ बोलको गीतमा शब्द, संगीत धन माया परियारको रहेको छ ।
गीतमा गायक धर्मेन्द्रले स्वयम स्वर दिएका छन् । उक्त सार्वजनिक रमाईलो झ्याऊरे गीतको भिडियोमा धमेन्द्रलाई अभिनेत्री नम्रता सापकोटले अभिनयमा साथ दिएकी छन्।
भिडियोमा सहयोगको नाममा दृष्टीविहिनको नाटक प्रेम अभियानमार्फत प्रस्तुत गरेका छन् । यस गीतको भिडियोमा जानुका थापा मगर, सुभम भुजेल, पबन बस्नेत काजी लगाएतको पनि अभिनय रहेको छ।
सुभम भुजेलको कोरियोग्राफी रहेको भिडियो रमाईलो खालको बनाइएको छ । सञ्जित श्रेष्ठको छायाँकन रहेको भिडियोलाई बिजेश पौडेलले निर्देशन तथा सम्पादन गरेका हुन् ।
‘निर्लज्ज र निर्दयी राज्यबाट केही अपेक्षा छैन’
नेपाली गीतसंगीतको क्षेत्रमा पृथक पहिचान बनाउन सफल लक्ष्मण शेष अहिले पनि कस्तो गीत बनाउँदा स्रोता रुचीको हुन सक्छ भन्ने कुरामा चिन्तित रहन्छन् । नेपाली चलचित्र ‘सिन्दुर पोते’मा संगीत भरेर एकाएक सांगीतिक क्षेत्रमा चर्चामा आएका संगीतकार लक्ष्मण शेषले सय भन्दा बढी चलचित्रमा संगीत भरिसकेका छन् । हेटौंडाका स्थानीय बासिन्दा शेष गीति लेखनमा पनि त्यतिकै सिपालु छन् । हेटौंडामा रहेकोे सुस्केरा क्लबमा ६ वर्ष लगातार संगीतको अभ्यास गरेका संगीतकार शेषका दर्जनौं सफल गीतहरु अहिले पनि स्रोताहरुको माग हुने गरेको छ । उनको संगीत सिर्जना रहेको मिठो बोलीमा, नघुमाऊ नजर, नहेर कर्केर, नबोल है मायाले ओर्केर फर्केर, परदेशी लोभिन्छ नीलो चोलीमा भन्ने गीत एकदमै चर्चित रहे । त्यस्तै चलचित्र ‘आफन्त’मा समावेश सबै गीत चर्चित भएका थिए । जस्तै सुख पनि जिन्दगी, पाउजुको छमछम, मनै रहेछ, आँखैले हेर्‍यो लौ न आदि पर्दछन् । महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको कृति ‘मुनामदन’माथि बनेको चलचित्रमा समेत संगीत भरेका उनले ५० भन्दा बढी टेलिफिल्म तथा ५०० भन्दा धेरै फुटकर गीतमा संगीत भरिसकेका छन् । संगीतकार संघका निवर्तमान अध्यक्षसमेत रहेका सरल स्वभावका संगीतकार लक्ष्मण शेषले मध्यान्ह दैनिकका लागि सानु श्रेष्ठसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
पछिल्लो गीतसंगीतको अवस्थालाई कसरी हेरिरहनु भएको छ ?
अधिकांश गीत संगीत अश्लिल, फेसनेवल र बढी टेक्निकलमात्र हुने गरेको छ ।
रोयल्टी र प्रतिलिपिको विषयमा चर्को आवाज उठ्ने गरेको पाइन्छ, व्यवहारमा उतार्न नसक्नुको कारण ?
श्रष्टाका नेता भनाउँदाहरु नै रोयल्टी र श्रष्टा अधिकारका नाममा बेइमान, भ्रष्टाचारी र संगीत माफियाका दलाल हुनुको कारण यस्ता विषयहरु भाषणमा मात्र सीमित हुन पुगेको हो ।
इन्टरनेटको माध्यमबाट प्रयोग हुने सांगीतिक रचनाको अधिकारबारे तपाईंको धारणा ?
जुनसुकै माध्यमबाट गीत संगीतको प्रयोग गरिए पनि रोयल्टी र प्रतिलिपि अधिकार जस्ता विषय श्रष्टाका सार्वभौम र मौलिक अधिकार हुन्, उनीहरुको सिर्जना प्रयोग भए बापतको एक एक सुका पनि उनीहरुले जस्ताको त्यस्तै पाउनुपर्छ ।
बौद्धिक सम्पत्तिको अवधारणा र यसको संरक्षणको महत्वबारे श्रष्टाहरु कत्तिको जागरुक छन् ?
बौद्धिक सम्पत्तिमाथिको हक श्रष्टाहरुको मौलिक हक हो र यसलाई वर्तमान संविधानको धारा २५ अन्तर्गत संरक्षण गरिएको छ । अधिकांश श्रष्टाहरुलाई यसबारे थाहै छैन र थाहा पाउनेहरुले पनि शुझ पचाएर यसलाई कानूनी प्रयोग गर्न चाहिरहेका छैनन् ।
सिर्जनाको कपिराइटलाई लिएर विवाद भइरहनुको कारण ?
केही मुठ्ठीभर संगीत माफियाहरुले दशकौंदेखि हजारौं नेपाली गीत संगीत माथि आफ्नो अवैधानिक स्वामित्व दाबी गर्दै फोकटमा करोडौं आर्जन गरिरहेका थिए । पछिल्लो समय केही सचेत श्रष्टाहरुले यस विषयलाई महत्वका साथ अभियानका रुपमा अगाडि बढाएको हुनाले विवाद जस्तो देखिएको हो । यो अझै तीव्र गतिमा उजुरी, मुद्दा र आन्दोलन हुँदै परिणाममुखी कारबाहीमा परिणत हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो ।
प्रविधिको सुविधाले गर्दा सिर्जनामा आलस्यता आएको हो ?
साधना बिना सिर्जना हुनै सक्दैन, प्रविधिले सिर्जनाहरुलाई प्रस्तुत गर्न सरल बनाउने मात्र हो ।
अडियो क्यासेट वा सिडिबाट हुने आर्थिक लाभको विकल्प केले परिपुर्ति गरिरहेको पाउनु हुन्छ ?
इन्टरनेटका माध्यमबाट सुलभ हुने विभिन्न राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय डिजिटल पोर्टल वा प्लाटफर्महरुबाट ।
गीतसंगीत उत्पादक, वितरक कम्पनीहरुले श्रष्टाको उचित मूल्यांकन गरिरहेको छ जस्तो लाग्छ ?
शोषण, अपमान र अन्याय मात्र ।
नेपाली संगीतलाई विश्वव्यापी बनाउन राज्यबाट कस्तो अपेक्षा गर्नु हुन्छ ?
निर्लज्ज र निर्दयी राज्यबाट केही अपेक्षा छैन ।
चलचित्र र अन्य गीतको संगीत सिर्जनामा के भिन्नता पाउनु हुन्छ ?
आजकल सबै भद्रगोल नै सुनिन्छ । तर पनि कुनै कुनै स्वतन्त्र गीत संगीतहरु स्वाभाविक र मौलिक सुनिन्छन् भने चलचित्रका गीत संगीतहरु प्रायः अलि नाटकीय ।
संगीतकार संघको अध्यक्ष रहिसक्नु भएको छ, तपाईंको कार्यकालमा भएका उल्लेखनीय काम र चाहेर पनि गर्न नसक्नु भएको कामको बारेमा सम्झनु पर्दा ?
समग्र श्रष्टा जगतका हित र समग्र संगीत क्षेत्रका उन्नतिका लागि मेरो कार्यकालमा जन्मिएका सपनाहरु, केही गर्न अघि सारिएका योजनाहरु र तुहिएका अभियानहरुका बारेमा सम्झिएर रुन मन लाग्छ, एक दिन हामी छुट्टै बसौंला ।
पछिल्लो पुस्ताले नेपाली गीतसंगीतलाई नरुचाउनुको कारण ?
सिर्जना, भाव र कला भन्दा कस्मेटिक र यान्त्रिक भएका कारण ।
समग्र गीतसंगीतको उत्थान र विकासका लागि तपाईंको विचारमा के गर्नुपर्ला ?
विगत १० वर्षदेखि यस क्षेत्रको उत्थान र विकासका लागि धेरै खालको प्रयास गरेर हेरियो, केही लागेन । अब सत्य, इमान्दार र असल श्रष्टाहरुले साँच्चिकै एकताबद्ध भएर बलिदान नै दिने गरी एउटा भूमिगत सांगीतिक क्रान्तिको अभियान चलाउनु पर्छ कि जस्तो लागिरहेको छ ।
सत्यराजको निर्देशनमा ‘चाहान्छु २’को भिडियो सार्वजनिक
काठमाडौं : गायिका रचना रिमालको स्वरमा ‘चाहन्छु २’ बोलको म्युजिक भिडियो सार्वजनिाक भएको छ । यसअघि प्रताप दासको स्वरमा मेल भर्सन ‘चाहन्छु २’ सार्वजनिक भएको थियो । सिम्पल एड मिडिया र अकेशा इन्टरटेन्मेन्ट को प्रस्तुती रहेको ‘चाहन्छु २’ गीत मा सरोज पोख्रेलको शब्द संगीत रहेको छ भन्ने अमोस तामाङको एरेन्ज रहेको छ ।
रचना रिमालको स्वरमा यो गीत निकै सुमधुर सुनिएको छ । यसअघि ‘चाहन्छु’ को पहिलो पार्टमा पनि मेल भर्सनमा प्रताप दास र फिमेल भर्सनमा रचना रिमालकै स्वर रहेको थियो ।
सार्वजनिक भिडियोमा रबिन पोख्रेल र समारिका ढकालको अभिनय रहेको छ । साथै बाल कलाकार अकेशा पोख्रेलको पनि अभिनय रहेको छ । सर्पोटिङ रोलमा नबिन प्रोख्रेल र बिमल सापकोटा छन् ।
भिडियोका निर्देशक सत्यराज चौलागाईं हुन् । सत्यराजले यसअघि दर्जनौं भिडियो निर्देशन गरिसकेका छन् भने नेपाली फिल्म ‘अनुराग’ उनि निर्देशित पहिलो फिल्म हो । उनको अर्को फिल्म ‘बिच्छेद’को पोस्ट प्रोडक्सनको काम भइरहेको छ ।